Entertainment ★ Una vaina bien : भगांकुर भनेको के हो ?
भगांकुर भनेको के हो ?
ताजा समाचार र विचार पढ्नका लागि हामीसँग फेसबुकलाइक र फलो गर्नुहोस्, तपाई ट्वीटरमा पनि समाचार प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ ।
‘भग’ तथा ‘अंकुर’ यी दुई शब्दले बनेको हो, जसले सामान्य रूपमा भगको अंकुर भन्ने अर्थ दिन्छ। अंग्रजीमा यसलाई clitoris भनिन्छ। यसका लागि नेपाली जनजिब्रोमा अन्य अनेक शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ।
महिलाहरूको यौनअङ्ग अलि भित्रतिर हुने भएकाले होला, कतिपय महिलाले पुरुषको दाँजोमा आफ्ना यौन अङ्गहरूलाई राम्रोसँग नियालेर हेरेका हुँदैनन्। आफ्नै अङ्गका बारेमा आधारभूत जानकारी राख्नु आवश्यक कुरा हो। प्रत्यक्ष रूपमा योनिलाई नै महिला यौनअङ्ग मानिए पनि अन्य कतिपय अङ्ग पनि यौनका दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन्छन्। त्यसमध्ये भगांकुर प्रमुख हो।
महिलाको यौनअङ्ग बाहिरबाट हेर्दा छालाका दुई पत्र एक-अर्कामा टाँसिए जस्तोमात्र देखिन्छ। यसैलाई हामी समग्रमा भग भन्छौं र यसैको भित्रतिर नै अन्य अङ्ग हुन्छन्। महिलाहरूमा यही भगको माथिपट्टि बोसोयुक्त तन्तुले बनेको क्षेत्र हुन्छ, जसले यौन तथा प्रजनन अङ्गहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। यौनाङ्ग क्षेत्रको उक्त भागलाई अंगे्रजीमा mons pubis (मोन्स प्युबिस) भनिन्छ। युवतीको भग क्षेत्रमा भएका छालाको पत्रलाई फर्काइयो भने भित्रतिर ठूलो भगोष्ठ, सानो भगोष्ठ, भगांकुर तथा योनिद्वारजस्ता विभिन्न अङ्ग देख्न सकिन्छ।
भगक्षेत्रको दायाँ र बायाँ बोसोयुक्त तन्तुले बनेका दुई पत्र हुन्छन्, जसलाई हामी ठूलो भगोष्ठ भन्छौं र त्यसलाई बाहिरतिर फर्काइयो भने दुवैतिर एक-एक गरेर दुई साना भगोष्ठ देख्न सकिन्छ। यही साना भगोष्ठले भित्री भगक्षेत्रलाइ छोपेर राखेको हुन्छ र एक किसिमले सुरक्षा प्रदान गर्छ। यी ठूला तथा साना भगोष्ठका छेउ, माथि र तलतिर एक-अर्कामा जोडिएको हुन्छ। यही भगोष्ठ जोडिएको स्थानमै भगांकुर हुन्छ। महिलालाई यौन सुख दिनु नै एकमात्र कार्य भएको देखिन्छ।
Publicado por Andy10 Martinez en 23:39
▼ nov 27 (66)
Òîâàðû äëÿ òâîð÷åñòâà îò ìàãàçèíà «Êðàñíûé ëèìîí»
В Очере полицейские по «горячим следам» раскрыли к...
Фасоль на посту. Плюсы и минусы бобовых и секреты ...
Калаши - последние язычники Азии
Названа самая угоняемая машина в Санкт-Петербурге
Иркутске начался монтаж главной городской елки
Миллиарды под колесами
Новый образовательный стандарт расширит гарантии б...
Russia, UAE, Turkey, Brazil await decision on Expo...
ПРЕИМУЩЕСТВА КОММУТИРУЕМОГО ДОСТУПА
Подключите домашний интернет по
नेपाल ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटका लागि छनोट »
सार्वजनिक स्थानमा हस्तमैथुन गर्न पाइन्छ
सेक्स गर्न बिर्सदै बेलायती नागरिक
Президент Сирии Башар Асад не примет участие в "Же...
«Мы не маленькие дети. На сладкие конфеты мы не ид...
Коммунисты подключили Следственный комитет к
На Красной площади разбирают чемодан Смотрите ори...
В Германии заключено соглашение о создании «большо...
Тверскую овощебазу закрыли незаконно?
Flughafen gewinnt an Fläche und Perspektiven
Дойче-банк расстался с доверительным
Нынешние женщины в два раза более распутные, чем б...
На «Женеву-2» без предварительных условий
Доступная среда обойдется Калужской области в 136 ...
Тело Димы Володина нашли в яме с мазутом
Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис. Иллюстр...
Cachonda asiática complaciendo dos pollas
Rubia en bikini cabalgando como la mas guarra
Jovencita golosa siendo desvirgada por una tremend...
Pillandoala cachonda de mi novia en la cocina
Emborrachándoasus compañeras de clases para foll...
Aprovechando la elasticidad de una rubia para foll...
Trío de chicas restregando sus coños en la cama
Juntando sus novias para follar deacuatro
मोवाइलबाटै एक अर्काको यौन अंग छुन सकिने
मेरो पनि यौन शोषण भयो
पुरुषको पहिलो नजर महिलाको कुन अंगमा पर्छ ?
भाग्यमानी माहीको कुरै अर्को
सुरक्षा माग्दै श्रुतिद्वारा उजुरी